मदीना अज़हारा | यात्रा समाचार
छवि | विकिमेडिया कमन्स
सियरा मुरैनाको फेदमा र कर्डोबादेखि kilometers किलोमिटर टाढा मदिना अज़हारा अवस्थित छ, यो रहस्यमय शहर अब्द-अल रहमान तृतीयले residence 8 AD एडीमा उनको निवास स्थान र खलीफाको राजनैतिक शक्तिको आसन हुनको लागि आदेश दिए। यूरोपमा सब भन्दा ठूलो मध्यकालीन राज्यहरू मध्ये एक नयाँ बनाइएको पश्चिमी स्वतन्त्र खलिफाटको एक बलियो र शक्तिशाली छवि प्रस्ताव गर्न।
यस प्रकार, मदीना अज़हारा अल-अंडालसको राजधानी बन्यो यद्यपि यो लामो समयसम्म टिकेन किनकि यो युद्ध पछि कार्डोबाको उमायाद खलीफाटको पतन भयो, सयौं १०१1013 देखि यस दरबार परिसर छोडियो।
धेरै शताब्दी बितिसक्दा मदिना अज़हाराका पुरातात्विक अवशेषहरू पत्ता लगाइए जुन सन् १ 1911 ११ मा भएको थियो र त्यसबेलादेखि उनीहरूलाई पुनःस्थापना र पुनर्स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।
1 कोर्डोबाबाट मदिना अज़हारा कसरी जाने?
1.3 निर्देशित भ्रमण
2 कसरी मदिना Azahara भ्रमण गर्ने
3 मदीना अझहारमा के हेर्ने?
4 घण्टा र मूल्य
कोर्डोबाबाट मदिना अज़हारा कसरी जाने?
कर्डोबाबाट तपाईंले A-432 रोड लिनु पर्छ जुन पाल्मा डेल रियोमा जान्छ जुन तपाईं रोन्डा डे पोनिटेबाट लिनुहुन्छ। दायाँ तिर करीव kilometers किलोमिटर पछि मेदिना अज़ाहाराको मोडमा जान्छ।
हरेक दिन पासेओ डे ला विक्टोरियाबाट गइरहेको एउटा बस छ, ग्लोरिटा अस्पताल क्रुज रोजा र मर्काडो डे ला विक्टोरियाको अगाडि प्रारम्भिक स्टपको साथ। पुरातात्विक साइटमा पुग्न यसले २० मिनेट लिन सक्दछ।
कर्डोबा टुरिस्ट अफिसहरूले लगभग hours घण्टा लामो मदिना अज़ाहाराको लागि मार्गनिर्देशित भ्रमणहरू प्रस्ताव गर्दछ, जसका लागि स्थानमा पुग्ने बसहरू मध्ये एउटामा स्थान सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ।
कसरी मदिना Azahara भ्रमण गर्ने
सब भन्दा सल्लाहकार कुरा यो हो कि यो पुरातात्विक अन्तरिक्ष को इतिहास को बारे मा अधिक जान्न को लागी एक दशक पहिले खोलिएको मेदिना अज़हरा संग्रहालयको भ्रमण गर्नु हो।
एक पटक भ्रमण समाप्त भएपछि तपाईले एउटा शटल बसहरू लिनु पर्छ जुन साइटको प्रवेश द्वारमा जान्छ र अर्को फेरि तल जान। संग्रहालय भ्रमण सहित मदिना अज़हारा भ्रमण गर्न अनुमानित समय २. and र hours घण्टा बीच छ।
मदीना अज़हारा तीन पर्खालहरूले चारै तिर बसेको पर्खालले घेरिएको छ, अल्जारा सब भन्दा माथिल्लो र मध्यवर्ती हो। सब भन्दा तल्लो क्षेत्र घरहरू र मस्जिदका लागि सुरक्षित गरिएको थियो, पर्खाल बाहिर बनाइएको। ऐतिहासिक स्रोतहरूले देखाए कि अब्द अल-रहमान तृतीयले आफूले शासन गरेको राज्यको भव्यता देखाउन सामग्रीहरूमा छाँटकाँट गरेनन्: सुन्दर बैजनी र रातो संगमरमर, सुन र बहुमूल्य पत्थरका साथै सावधानीपूर्वक शिल्पकला।
मदीना अझहारमा के हेर्ने?
मेदीना अज़हारा पहाडको किनारमा धेरै घरहरू बनाइएको थियो जुन आयताकार घेरा बनाएर कर्डोबा जाने सडकलाई नियाल्दै थियो।
मदीना अजहरको प्रवेशद्वारमा त्यहाँ एउटा दृश्य छ जहाँबाट तपाईंसँग पुरानो दरबार परिसरको अद्भुत दृश्यहरू छन्, र जहाँबाट तपाईं घरहरू र शहरका ढोकाहरूका लेआउट देख्न सक्नुहुन्छ।
पूर्वमा पनि तपाई अल्जामा मस्जिदका अवशेषहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन शहरको मुख्य हो। मदीना अज़हाराको भ्रमणमा तपाईले खलिफका प्रधानमन्त्री जाफरको घरको ढोका देख्नुहुनेछ, जसले यसको मूल सजावटको केही अंश राख्दछ। अवशेषहरू मध्ये, हाइलाइट तीन घोडाहरू कमानाहरू सहित यसको ठूलो ढोका हो।
दुर्गको अंशमा सार्वजनिक पात्र थियो र यो त्यहाँ आधिकारिक भ्रमणहरू भएको थियो। सबैभन्दा माथिल्लो भाग अल्टो सालोन हो, आर्केडको साथ पाँचवटा नाभाहरूमा क्रमबद्ध। अझ तल सालोन रिको छ, महल परिसरको केन्द्रीय अक्ष। अर्को उल्लेखनीय ठाउँ ग्रेट पोर्टिकोको मेहरा हो, जुन मेदिना अज़हरा दरबारको मुख्य प्रवेशद्वार हो।
११ औं शताब्दीको सुरूमा अल-आन्डलस बिगार्ने युद्धहरूको कारण साइट भग्नावशेषमा नपुगुञ्जेल ठूलो क्षति भयो। एक प्रभावशाली शहर सिर्जना गर्न को लागी प्रयास मात्र सत्तरी वर्ष मात्र चल्यो।
घण्टा र मूल्य
शरद winterतु र जाडोमा (सेप्टेम्बर १ 16 देखि मार्च 31१ सम्म) घण्टाहरू बिहान। देखि साँझ from बिहानदेखि म Tuesday्गलबारदेखि शनिवार र आइतवार 9:०० बिहान सम्म हुन्छन्। वसन्त (तुमा (अप्रिल १ देखि जून १ 18), मदिना अज़हारा मंगलबारदेखि शनिवारसम्म, बिहान to देखि 15,00 बिहान, र आइतवार र छुट्टीहरूमा बिहान 1 बजे देखि p बिहानसम्म खुला रहन्छ। सोमबार यो आगन्तुकहरूको लागि बन्द छ।
मदिना अज़हारामा प्रवेश मूल्यको बारेमा, यो यूरोपियन युनियनका नागरिकहरूको लागि निःशुल्क हो। बाँकी आगन्तुकहरूका लागि यसको मूल्य १.eयूरो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » मदीना अज़हारा
हाइड पार्क, लन्डनमा एक शाही पार्क